I-Bachelor Degree City Yunivesithi yaseLondon I-Global Leaders Scholarship e-UK, i-2019 2022
Julayi 23, 2019 U-Okpara Francis
Ukutsala i-EU efanelekileyo kunye nabafundi bamanye amazwe, iYunivesithi yesiXeko saseLondon ibonelela ngenkxaso-mali yeeNkokeli zeHlabathi ngonyaka we-2019-2020.
Ibhaso limiselwe ngokusekwe kwimfundo kwaye iyafumaneka ukulandela inkqubo yesidanga sokuqala eyunivesithi.
IsiXeko, iYunivesithi yaseLondon ihlelwe yaba zizikolo ezihlanu, ngaphakathi kwazo kukho amasebe namaziko emfundo angamashumi amane. Lilungu loMbutho we-MBAs, i-EQUIS kunye neeDyunivesithi zase-UK. Inika izidanga zeBachelor's, zeMasters, kunye nezeDokotela kunye nezatifikethi kunye nediploma.
Kutheni kwiSixeko, iYunivesithi yaseLondon? Iyunivesithi ibonelela ngenkonzo yobungcali, ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yolwazi kubafundi. Apha banokufumana amava omsebenzi anokufuneka kwikamva labo lomsebenzi.
IYunivesithi okanye uMbutho: University University yaseLondon
Izinga leNqanaba: isidanga sebhatshela
Indlela yokuNgena: online
Ubuzwe: I-EU kunye nabafundi bamanye amazwe
Ubungcali buya kuthathwa e-UK
Amazwe afanelekileyo: Amabango avela kumazwe e-EU nakwihlabathi liphela
Ikhosi eyamkelekileyo okanye imixholo: Inkqubo yesidanga sokuqala kuso nasiphi na isifundo
Iikhrayitheriya ezamkelekileyo: Ukulungela le ngxowa-mali, umfaki-sicelo kufuneka abe yi-EU okanye umfundi wamazwe aphesheya onelizwe elilinganayo nelika-'A '.
Abafundi bamanye amazwe benza inkqubo eyaziwayo yamazwe aphesheya.
Umviwa kufuneka afake isicelo sonyaka wokuqala wezifundo zesidanga sokuqala kwi-2019/20 kwaye afezekise amabakala amiselweyo ngokwemiqathango yesibonelelo sabo esiXekweni.
Indlela Isicelo: Ukuba ufuna ukufaka isicelo sokufumana eli bhaso lemfundo kuqala kuya kufuneka uthathe ukwamkelwa Izifundo zesidanga sokuqala eyunivesithi. Emva kokwamkelwa, abafowunelwa baya kuqhagamshelwa ngokuthe ngqo nesimemo sokubhalisela ithuba.
Amanqaku asekelayo: Akukho maxwebhu axhasayo ayimfuneko kwesi sibonelelo. Ngexesha lokufaka isicelo, iyunivesithi inokucelwa.
Izidingo zokungeniswa: Ngokuthatha isiqinisekiso, abafaki-zicelo kufuneka bahlangane iimfuno zokungena yunivesithi.
Isidingo soLwimi: Abaviwa kufuneka babonise ukuba badibene nolwazi lwesiNgesi.
inzuzo: Abafaki-zicelo baya kufumana isixa esixabisa ukuya kuthi ga kwi-1,000.
Ixesha yesicelo: Septemba 30, 2019
Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship Ngaphantsi kweeSchoolships
Post Previous:I-Keele yeeFizi zoThutho lwaMazwe ngamazwe oluPhezulu kwi-UK, i-2019-2020
Okulandelayo Post:$ 100,000 Ikhemesti yeZidanga zamazwe aphesheya kwi-Merit Scholarship e-Australia, 2020
UVincent Nyakambi uthi:
Agasti 18, 2019 kwi-6: 34 am
Unokufaka njani isicelo sokufunda eyunivesithi yakho eyaziwayo phantsi kwesifundi?